Thwebula IMVU 522.0 – Vessoft
Imvu – a software ukuze simazi futhi ukuxhumana in the world virtual 3D. Isofthiwe ikuvumela ukuba adale uhlamvu okuthandayo, pick up izingubo, ukuhlobisa igumbi, ukuyothenga, ngezifiso nasendzaweni njll imvu isebenzisa izinhlamvu 3D eyenza ukuba bahlangane cishe, abangane abasha futhi bazijabulise. Imvu iqukethe imali game ukushintsha indlela abukeka ngayo umlingiswa noma ukuthenga izinto ezingokoqobo esitolo Ukukhetha eziningi imikhiqizo. Imvu futhi kwenza ukwakha izesekeli ehlukahlukene, izingubo noma ekhaya ifenisha futhi adayise imikhiqizo yakho kwabanye abasebenzisi.
Abahlobo in the world 3D
Kwakha 3D izinhlamvu
Ikhono bagqoke umlingisi futhi ukuhlobisa igumbi
EBukhoneni esitolo eziningi ezahlukene umkhiqizo
Dala futhi adayise imikhiqizo yakho siqu
Amazwana on IMVU:
IMVU Ahlobene software:
Français, Español, Deutsch, 中文... mIRC 7.46